Ku-deeqaha Kaydka - Cuntooyinka Taayirrada
Ma ogeyd inaad ku deeqi karto keyd si aad ugu taageerto Cuntooyinka Lugaha Lugta? Sababtoo ah faa'iidooyinka canshuurta ee la yimaada ku deeqa saamiyada la mahadiyo, deeq-bixiyeyaal badan ayaa doorta dariiqan sidii ay uga dhigi lahaayeen doolarradooda inay sii socdaan.
Waad ka goyn kartaa qiimaha buuxa ee keydka waqtiga tabarucaadka la sameynayo, taas oo ku siinaysa fursad aad ku weyneyso saameyntaada adiga oo suurtogal ka dhigaya yareynta mas'uuliyaddaada canshuurta. Ku deeqa saamiyada Metro Meals on Wheels waa hab aad u fiican oo aad ku qaban karto qaybtaada si loo hubiyo in waayeelka maxalliga ahi u helaan cuntada nafaqada leh ee ay ugu baahan yihiin inay si madax-bannaan ugu noolaadaan.
Kala xiriir Patrick Rowan taleefanka (612) 623-3363 ama [email protected] si aad wax badan uga barato waxtarrada ku-deeqaha saamiyada
Haddii aad diyaar u tahay inaad sameyso tabaruc kayd ah, waxaad xor u tahay inaad buuxiso oo aad soo laabato foomkan. Dhameystiran ayaa emayl loogu diri karaa [email protected] ama boostada loo diro:
1200 Washington Ave., Ste. 380
Haddii aad u baahato, macluumaadka koontada dallaalkayagu waa sida soo socota:
Cuntada metrooga ee Wheels Inc
Canshuurta ID# 31-1501057
Xisaabta Raymond James# 30727274
Lataliyaha Dhaqaalaha, Raymond James Financial Services, Inc.